स्टे’जमै किन कु’टिए गायक राजेश पायल राई ? (भिडियो सहित) – Sadhaiko Khabar
स्टे’जमै किन कु’टिए गायक राजेश पायल राई ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष १७, २०७८ समय: १६:२३:२९
काठमाडौं/ राई इज किंग’ भनेर चिनिने चर्चित गायक राजेश राई स्टेजमै कु’टिएका छन् । अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०२२ को अवसरमा अमेरिकामा आयोजित एक कन्सर्टमा एक दर्शकले गायक राईलाई गीत गाइरहेको अवस्थामा छेउमा गएर घाँ’टी न्या’केका हुन् ।
ती दर्शकले अंगालो हाल्ने नि’हुँ गरेर राईको घाँ’टी न्या’केपछि दर्शकहरुले राईलाई जो’गाएका थिए । राईलाई कसले पि’टेको हो भन्ने नाम खुलेको छै’न । यसबारेमा विस्तृत समाचार आउन केहि समय लाग्ने बताइएको छ ।
राजेश पायल राई नेपाली गीतका चर्चित गायक हुन । उनले थुप्रै नेपाली चलचित्रका गीतहरूमा स्वर दिइसकेका छन । उनी विश्वमै ५ घण्टामा ९ गीत रेकर्ड गर्ने उनी नै पहिला गायकका रुपमा उनलाई चिनिन्छ । उनलाई स्टेजमा हा त’पा त गर्ने व्यक्ति र हा त’पा त गर्नुको कारणबारेमा कुनैपनि कुरा सा’र्वजनिक गरिएको छैन ।
पिता रत्न राई र माता सञ्चलक्ष्मी राईका सन्तानका रूपमा उनको जन्म वि.स.२०३२ असोज १४ गते खोटाङको बुइपा भन्ने ठाउँमा भएको थियो । उनको पहिलो गीत रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ भएको ‘सम्झनाको कुरा नगर’ भन्ने बोलको गित पहिलो थियो ।
उनलाई चचिर्त बनाउन सफल गित ‘फैलियो माया दुबो सरि’ र ‘बैगुनी रैछौ मायालु’ जस्ता गीतहरु रहेका छन् । उनले २०६६ सालमा प्रसारण भएको चलचित्र ‘शिलशिला’ बाट विभिन्न अवार्ड समेत प्राप्त गरेका छन् । हे’र्नुहोस् पूरा भिडियो :